GAROOWE : Guddoomiyaha gobolka Nugal oo ka digey qas iyo mudaharaad aan sharci ahayn
January 13, 2013 10:48 am GMT - Written by Editor - Edited by Editor
Garoowe:-Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali ayaa waxa uu ka digey qas iyo mudaharaad aan sharci ahayn oo ka dhaca gobolka Nugaal, kadib markii maanta nin isku magacaabey Musharax uu mudaharaad kooban halkaasi ka sameeyay, waxaana uu sheegey in aysan aqbleyn in dadka ammaankooda la waxyeeleeyo.
Guddoomiyuhu, waxa uu sheegey in dadka Buurtinle ay ku jiraan xili wanaagsan iyada caruurto waxbarato dhibaato ammaan-xumana aysan jirin sidaas awgeed loo baahneyn in laga waxyeeleeyo ammaanka iyo horumarka iminka ay heystaan.
“Waan ogalnahay Mucaarad si sax ah wax u dhaliila ama u toosiya, laakiin ma ogalin in dadka la kiciyo oo qas iyo fawdo la sameeyo, iyada oo la doonayo in bililiqo iyo waxyaalo kale oo ami-daro ah ay dhacaan ayuu yiri”.
Maanta,(Axad) ayaa waxaa Buurtinle soo gaarey nin horey uga mid ahaa Garsoorayaasha Maxkamada Garoowe kaas oo lagu magacaabo Maxamuud, waxaana uu sheegey in uu yahay Musharax Madaxweyne.
Maxamuud, ayaa horey loogu xirey Xabsiga Boosaaso kadib markii uu ka soo horjeedsadey Maxkamadii loo sameeyay dadka Argagixisada ku caddaato.